Orinasa sakafo matanjaka be kintana anise kilasy sakafo matanjaka indrindra ary mpanamboatra | HaiRui
Farmasiona voajanahary Bup ...
Kintana voajanahary ara-tsakafo ani ...
Menaka oregano voajanahary voajanahary
kalitaon'ny Carvacrol avo lenta ...
Fitrandrahana dipoavatra voajanahary ...
Sakafo menaka manitra ilaina amin'ny kintana voajanahary sakafo
DRUM, Araka ny takian'ny mpanjifa
Kilasin'ny farma, kilasy fitsaboana, kilasy sakafo, naoty kosmetika
OBM (ekena ny OEM & ODM)
Hairui Natural Pure Star Anise Oil
Rano madio tsy misy loko na mavo
Voan'ny anise kintana
Spa fanorana fanorana Spa, fikolokoloana ny hoditra, fanatsarana tarehy
Menaka tena ilaina
Fonosana OEM kely: tavoahangy aliminioma; tavoahangy HDPE; tavoahangy plastika; tavoahangy fitaratra, (250ml, 500ml, fonosana OEM 1000ml ect, ampidiro fanontana logo lable). Fonosana ankapobeny: amponga 25kg miaraka amina harona plastika avo roa heny 25kg / 50kg / 180kg
Quantity (kilao) 1 - 100 101 - 300 > 300
Est. Time (andro) 6 8 Hifampiraharahana
Ny menaka anise kintana dia azo avy amin'ny alàlan'ny setroka etona avy amin'ireo sampana, ravina ary voankazo. Hazo anise kintana
mamoa indroa isan-taona, izany hoe amin'ny lohataona sy fararano.
Ny singa lehibe amin'ny menaka anis kintana dia trans-anethole, anisaldehyde, 1,8-cineole, estragole, alpha-terpineol, linalool,
limonene, ary alpha-phellandrene. Raha ny mahazatra, ny atin'ny trans-anethole dia mira ampitahaina amin'ny teboka mangatsiaka.
Rano mazava mavo tsy misy loko na hatsatra
Mamy, anis ary fennel feno vatana feno
Tsy mety levona anaty rano, mety levona amin'ny étanol
70% amin'ny Trans-anethole
Ny menaka anis Star ary ny vokatra azo avy aminy novolavolaina dia ampiasaina betsaka amin'ny sakafo, akora simika ao an-trano, fanafody, fitaovana fananganana ary indostrian'ny fiarovana ny tontolo iainana.
Ny menaka anis Star dia manana tsiro mamy mahery, ary ampiasaina amin'ny fanalefahana, toy ny mofomamy, divay, zava-pisotro malefaka, vatomamy,
hena, fanasan-nify ary fanadiovana vava, ary mpandraharaha manasitrana sigara.
Ny menaka anise Star koa dia ampiasaina ho hanitra amin'ny vokatra simika ao an-trano, toy ny savony sy kosmetika. Ireo menaka manitra frantsay malaza eran'izao tontolo izao sy zava-pisotro misy alika dia mamokatra menaka anise kintana ho fitaovana manta avokoa.
Ny vokatra azo avy amin'ny solika anise kintana dia misy anethole voajanahary, anisaldehyde, estragole, ary acétone anisyl.
Amin'ny fampiharana ara-pitsaboana, ny menaka anise kintana dia ampiasaina ho akora fototra amin'ny fanafody anti-cancer synthetic.
Ho an'ny tanjona indostrialy, ny menaka anise kintana dia ampiasaina ho toy ny mpamatsy famenon-tsolika tsy misy cyanide.
Ankoatr'izay, mba hamokarana ny zava-mahadomelina fanoherana ny vorona "Tamiflu", asidra shikimmi mpanelanelana dia nalaina avy tamin'ny voankazo misy kintana, miaraka amin'ny
fitakiana avo lenta tato anatin'ny taona vitsivitsy.
1. tavoahangy 250-1000ml / Aluminium
2. Amponga 25-50kg / plastika / baoritra baoritra
3. 180 na 200kg / barika (amponga vy nandrisika)
4. Amin'ny alàlan'ny fangatahan'ny mpanjifa
Previous: Menaka Aloe Vera fanosotra fikolokoloana vatana
Manaraka: Diffusers Menaka Rosemary tena ilaina
1. Voajanahary sa syntaktika ireo huile essentielle ireo?
Mpanamboatra izahay ary mazàna ny vokatra dia alaina amin'ny zavamaniry voajanahary, tsy misy solvent miampy fitaovana hafa.
Azonao atao ny mividy azy soa aman-tsara.
2. Azo ampiasaina mivantana ho an'ny hoditra ve ny vokatray?
Tsara homarihina fa ny vokatray dia menaka tena ilaina, tokony ho nampiasainao aorian'ny fizarana amin'ny menaka fototra
3. Inona ny fonosan'ny vokatray?
Samy manana fonosana samihafa momba ny fitrandrahana solika sy zavamaniry henjana izahay.
4. Ahoana no hamantarana ny naoty ny menaka esansiela samihafa?
Matetika misy 3 naoty menaka voajanahary voajanahary
A dia ny faritry ny Pharma, azontsika ampiasaina amin'ny indostrian'ny fitsaboana ary azo antoka fa misy amin'ny indostria hafa.
B dia ny Kilasy Sakafo, azontsika ampiasaina amin'ny tsiro sakafo, tsiro isan'andro sns.
C dia kilasy Perfume, azontsika ampiasaina amin'ny tsiro sy hanitra, hatsarana ary fikolokoloana ny hoditra.
5.Ahoana no hahalalantsika ny kalitao?
Ny vokatray dia nanaiky ny fitsapana matihanina ary nahazo mari-pankasitrahana, koa, alohan'ny hanafarana anao dia afaka manolotra maimaimpoana anao ny santionan'ny vokatra, ary avy eo aorian'ny fampiasanao, azonao atao ny mahazo fahatakarana tsara kokoa ny vokatray.
6.Inona ny fandefasana anay?
Vonona vonona, amin'ny fotoana rehetra. TSY MISY MOQ,
7. inona ny fomba fandoavam-bola?
T / T, Paypal, Western union, Alibaba fandoavana
Ranon-basilà madio mitrandraka menaka basily
Fambolena zavamaniry Borneolum na flake Crystal Borneol
Vidiny ho an'ny menaka tena ilaina amin'ny hazo agar
Manufac menaka patchouli voajanahary vidin'ny fifaninanana ...
kalitaon'ny pharmaceutika Southernwood avo lenta ...
Manamboatra organika 100% mangatsiaka madio voatsindry ...